विवाहपछि श्रीमानको घरमा रा’ज गर्छन् यी ४ राशिका युवती। कतै तपाइकाे त परेन? हेर्नुस « गोर्खाली खबर डटकम
विवाहपछि श्रीमानको घरमा रा’ज गर्छन् यी ४ राशिका युवती। कतै तपाइकाे त परेन? हेर्नुस
यी राशी भएका महिलाहरु आफ्नो क’र्मघरमा आफ्नो उपस्थिति ब’लियो रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन । आफ्नो पतिलाई नि’यन्त्रणमा राख्नको लागि साम, दा’म,द’ण्ड, भे’दको समेत प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन् । यस राशिका महिलाहरु आफ्नो कर्मघरलाई स्वर्ग बनाउन हर सम्भव प्रयत्न गरिरहन्छन्।
वृश्चिक राशीः यो राशी भएका महिलाहरु अ’फ्ठ्यारो परिस्थतिमा रु’ष्ट रहेका व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने क्ष’मताका हुन्छन्। यस राशिका महिलाहरु आफ्नो पतिलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गर्छन् । पतिको कुरा सुन्दै परिवारमा राज गर्ने यस राशिका महिलाहरु आफ्नो कुरा राख्न अलिकति पनि ड’राउदैनन् । परिवारको हरेक कार्यमा आफै हा’वी हुने आ’दत यिनीहरुमा हुन्छ ।कर्कट राशिः यो राशी भएका महिलाहरु जि’द्दी हुन्छन् ।
साथै अरुलाई सहजै मनाउन सक्ने खु’बी यिनीहरुमा हुन्छ । घर परिवारमा हुने हरेक कार्यको निर्णयमा आफ्नै प्र’भाव जमाउने खालका हुन्छन् । श्रीमानलाई मनाउन यिनलाई कुनै क’ठिनाई हुँदैन । कर्कट राशि भएका बुहारीले घरमा रा’जनै गर्छन् ।
सिंह राशिः यो राशी हुने महिला व्य’वहारमा अ’त्याधिक जि’द्दी मानिने र आफ्नो पतिलाई जि’द्दीलेनै नियन्त्रणमा राख्न स’क्षम हुने गर्छन । कर्मघरमा हुने हरेक कार्यमा आफ्नो सं’लग्नता कायम राख्न ख’प्पिस हुनाले आफ्नो क’र्मघरमै राज नै गर्ने गर्छन् । यस राशिका महिलाहरुसँग हरेक परिस्थितिमा आफ्नै तरिकाले स’मस्याको स’माधान गर्ने खु’बी हुन्छ ।
अ’ल्सरको स’मस्याले ग्रस्त हुनुहुन्छ ? पिउनुहो’स् मात्र यो एक ड्रिंक्स, मिल्छ राहत